WordPress: Ampio fampahalalana momba ny mpanoratra ao amin'ny Sidebar | Martech Zone
Zoma, Jolay 24, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fanavaozana: namorona Widget Sidebar aho hanehoana ny mombamomba ny mpanoratra anao.
Ny lahatsoratr'i Jon Arnold androany dia mahafinaritra amin'ny torohevitra momba ny famolavolana tranonkala iray, saingy tsikaritro ny hevitra voalohany nanondro ahy ny lahatsoratra. Famantarana milaza izany fa mila manao izay hampahalala bebe kokoa ny mpanoratra.
Tsy namorona widget ho an'ity aho (ary gaga aho fa tsy misy olon-kafa!), Saingy afaka nanitsy ny sisin-dohako tao amin'ny lohahevitra bilaogiko WordPress aho ary nanampy ity kaody manaraka ity:
Ao amin'ny pejy fandefasana tokana, misy fizarana fanampiny eo anilan'ny sisin-dàlana izay misy ny sarin'ny mpanoratra (mampiasa a Gravatar), ny anarany feno, ny pejin'izy ireo ary ny mombamomba azy ireo araka ny voalaza ao amin'ny mombamomba azy ireo. Nanampy kilasy roa aho mba hiantohana fa mitsingevana miankavia ny gravatar ary ny haavon'ny fizarana dia manana haavo farafahakeliny raha toa ka tsy nanana fampahalalana ny mpanoratra.
get_the_author_meta('mailaka') dia mamerina ny adiresy mailaka an'ny mpanoratra ary mandefa izany amin'ny asan'ny get_avatar. ny get_avatar fandikan-teny dia mandika ny mailaka amin'ny mpamaritra izay ampitaina amin'ny mpizara gravatar handefa ny sary sahaza azy. Ilaina izany satria te hisoroka ny fanaovana adiresy mailaka ao amin'ny loharano pejy ianao… tia manangona mailaka ny spam.
Ny angona hafa dia alaina amin'ny fampiasana tsotra fotsiny the_author_meta vaovao.
Tags: famantaranaLahatsary Marketingsarimihetsikawordpress cse
24 Jul 2009 amin'ny 12:33 PM
Tsy mahafinaritra ve ny manana hevitra ary mampihatra azy eo noho eo fotsiny? Azo atao izany noho ny Freedom One (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) - "Ny fahalalahana handinika ny fomba fiasan'ny programa, ary hanova azy hahavita izay tianao."
24 Jul 2009 amin'ny 11:58 PM
Tsikaritro fa ny mpamaky RSS ahy dia mbola mitanisa anao ho mpanoratra isaky ny lahatsoratra. Misy vintana hanovana izany ve ka haneho ny anaran'ilay mpanoratra?
Jul 25, 2009 amin'ny 12: 10 AM
Misaotra nanondro izany, Ade! Izany no sehatry ny Feedburner hampifandray ny feed amin'ny iTunes (izay tsy ilaiko!). Mahaliana fa ny fampidirana ny mpanoratra amin'ny fahana dia mety mitaky fivoarana sasany!
25 Jul 2009 amin'ny 9:49 PM
Navoaka fotsiny: Version 1.0.0 an'ny Widget mpanoratra WordPress Sidebar!
12 Aogositra 2009 amin'ny 12:13 PM
Te hanana izany ao amin'ny wordpress.org ve ianao mba hahazoantsika vaovao farany?
ary ho fanontaniana faharoa: raha te-haneho ohatra AIM aho rehefa feno, dia afaka mampiasa kaody mitovy amin'izany aho na hanao toy izao: "AIM:" Tiako raha tsy aseho na inona na inona io raha foana ny famoahana…
Mety hanova ny plugin-nao ho an'ny pejiko aho hanehoana ny bio sy ny fampahalalana fanampiny fanampiny: ny fifandraisana toa an'i icq, tanjona, xfire sns.
21 Aogositra 2009 amin'ny 1:48 PM
Hevitra mahatalanjona inona ilay widgetanao manampy gravatar sidebar. (Tokony hiaiky aho fa tsy fantatro akory ilay teny hoe gravatar, mandra-pahatongako manaraka ny rohinao raha te hahalala - misaotra). Tena hapetrako eo amin'ny tranokalaniko ny widget-nao.
BTW, fampahalalana marobe ao amin'ny tranonkalanao, faly tokoa aho nahita azy io.